FAMPIOFANANA ARAKA ASA : Hanefa latsakemboka iray isan-jato ny orinasa tsy miankina
Hanangana tahirim-bola manokana ho an’ny fampiofanana araka asa eto Madagasikara ireo mpiara-miombon’antoka ara-tsosialy. Amin’izy ireo dia hapetraka ho lalàna mifehy ny orinasa tsy miankina ny fampiofanana ny mpiasa. 25 avril 2017
Misy, noho izany, ny latsak’emboka iray isan-jato izay haloan’ny orinasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka ara-tsosialy ireo izay ahitana ny “ GEM, FiVMPAMA, ny CTM ary ny FCCIM miampy ny Fanjakana izay ahitana ny minisiteran’ny Indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina, ny minisiteran’ny Vola sy ny teti-bola ary ny minisiteran’ny Fampiofanana araka asa sy teknika.
Tafiditra anatiny izany ihany koa ny fampiofanana ireo mpiasa efa am-perinasa sy ireo vao hiditra hiasa.
Ny fitotonganan’ny fari-pahalalan’ny tanora mihitsy no tsy ampy. Antony mahatonga izany ny fisian’ireo sekoly tsy manara-dàlana sy tsy mahafehy ny lalam-piofanana misy ao aminy. Najoro, noho izany, ny tahirim-bola manokana ho an’ny fampiofanana araka asa eto Madagasikara io, taorian’ny fakan-kevitra tamin’ny fidinana tany amin’ny faritra. Tamin’izany ko no nanapahana fa ny orinasa tsy miankina no hanefa ny latsak’emboka iray ao anatin’io Tahirim-bola io isan-jato. “Io latsak’emboka io no hoentina mampiofana ny mpiasa am-perinasa ao amin’ny orinasa . Hahazo tombontsoa amin’izany ny mpiasa sy ny mpampiasa.”, hoy Joséphine Andriamamonjisoa, filohan’ny Antenimieran’ny Varotra eto Antananarivo.
Efa voalavola io tetikasa io ary eo am-panatanterahana izany ireo mpiara-miombon’antoka ara-tsosialy ireo ka hatolotra ny rafitra mpanao lalaàna izany ary hapetraka ho lalàna mifehy ny asa. Miandry ny fanomezan-dalana avy amin’ny Fanjakana sisa dia hiroso amin’ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa ho fampan- drosoana ny sehatry ny asa, amin’ny volana janoary 2018 Vola mitetina 6 tapitrisa euros no natolotry ny Sampandraharaha frantsay misahana ny fampan- drosoana na AFD mba ho fanampiana amin’ny famolavolana io tetikasa io. Tanjona amin’izany ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina eto amintsika sy ireo tanora miasa ambanivohitra ihany koa.